Nagu Saabsan - Diblomaasi
Diblomaasi waa deggel hormuud u ah falanqeynta Siyaasadda Arrimaha Dibadda, wararka madaxa bannaan iyo ajendaha-dejinta wararka, falanqaynta siyaasadeed iyo faallooyinka fikirka-gaarka ah ee sida gaar ah loogu qoray/diyaariyey jiilka cusub. Diblomaasi waxay daabacdaa majaladdo si joogta ah usoo baxo bil dhaaf. Si aad u hesho macluumaad dheeri ah ee ku saabsan Majaladda Diblomaasi riix
Ujeedka rasmiga ah ee majaladda Diblomaasi ayaa ah in la helo goob si joogto ah ugu faalooto su’aalaha caalamiga ah ee saameynaya Soomaaliya, iyadoo la isu keenayo aqoonyahano aqoon u leh diblomasiyadda, nidaamyada dawladeed, maaliyadda, warshadaha, waxbarashada, iyo sayniska. Majaladdaha ay soo saarto Diblomaasi waxaa lagu tiriyaa mid kamid ah majaladaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya loogu akhriska badan yahay. Majaladda waxay daabacday dhowr maqaallo oo faallooyin cajiib ah ka bixiyay geedi socodka dowladnimada Soomaaliya iyo xariirka caalamiga oo ay kamid yihiin,…Danta Qaranka
Danta Qaranka ayaa sharxi karta himilooyinka gobolka. Waxaa sidoo kale looga faa’iideysan karaa iyadoo lagu shaqeynayo fulinta siyaasadaha iyo barnaamijyada dhabta ah ee la raacay. Waxaa loo isticmaali karaa si xeeladaysan doodaha siyaasadeed si loo sharaxo, loo maleeyo, ama loo naqdiyo. Khilaafaadka casriga ah ee ku saabsan siyaasadda arrimaha dibedda inta badan waxa ka soo baxa madmadow mana aha oo kaliya fikradaha kala duwan ee ku saabsan nuxurka danaha qaranka. Si kasta oo ay tahay madmadowga, fikradda danta qaranka waxay udub-dhexaad u tahay isku day kasta oo lagu sharaxayo, lagu saadaalinayo, laguna fahmayo hab-dhaqanka caalamiga ah.
Mala socotaa in aad kamid noqon karto Diblomaasi, waa haddii aad tahay qof wax qora, jecel in bulshada wanaag iyo baraarujin usoo gudbiyo? jawaabtaada haddii ay ‘Haa tahay, waxaad nagala soo xariiri kartaa emaylka hoose ee qoraaga loogu tala galay.
Waxaad nagala soo xariiri kartaa emaylada hoose:
Haddii aad hayso warar ka dhacay halka aad joogto iwm, adigoo mahadsan waxaad noogu soo gudbin kartaa.
Xafiiska Wararka: info@diblomaasi.com
Haddii aad xiisaynayso inaad qoraalo qiimo u leh bulshada ku baahiso Diblomaasi waxaad nagala soo xariiri kartaa
Haddii ay jiraan waxyaabo kale ee aad u baahan tahay inaad kala hadasho majaladda Diblomaasi nagala soo xariir
Waxyaabo kale: diblomaasi@diblomaasi.com